COLONIZATION မော်ကွန်းတိုက် - Afrikhepri Fondation
တနင်္လာနေ့, စက်တင်ဘာလ 20, 2021
ကြိုဆို Categories အခြေချ
လက်ရှိ "ပchartိညာဉ်စာတမ်း" ကိုကျွန်ရောင်းဝယ်မှုကာလအတွင်းဝါရှင်တန်တွင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီးနောက် ၁၈၈၅ တွင်ဘာလင်ကွန်ဖရင့်၌အနောက်တိုင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံများကအာဖရိကကိုခွဲဝေသုံးစွဲခဲ့ကြသည်။
(၁၉၅၅ မှ ၁၉၇၁ ခုနှစ်အထိ) ၁၅ နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းပြင်သစ်သည်ကင်မရွန်းတွင်လျှို့ဝှက်စစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့သည်။ သောင်းချီသောသိန်းပေါင်းများစွာဖြစ်စေခဲ့သောကိုလိုနီခေတ်စစ်ပွဲဖြစ်သည့် neocolonial စစ်ပွဲ ...
BURREAU သည် DRC တွင်ရည်ညွှန်းမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ။
AN FANTOCHE ကိုင်ဆောင်သူသည်မည်သည့်အခါမျှလွတ်လပ်သောတိုင်းပြည်တွင်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပါ》 ။ ၂၀၁၀ မှာ Lubumbashi မှာငါ့ကိုမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။
၁၄၅၄၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်၊ ဗာတီကန်သည်ကေနိလူများကို“ သုတ်သင်ပယ်ရှင်း” ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်
Kimpa Vita, ကှနျဂိုနိုငျငံတျော၏ပရောဖကျမကဘယ်သူလဲခဲ့သလဲ
၁၆၈၄ မှ ၁၆၈၆ အတွင်းမွေးဖွားခဲ့ပြီးကင်မ်ဗီတာသည် ၁၇၅၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီး Mbanza Kongo (အနောက်မြောက်အင်ဂိုလာ) တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးကွန်ဂိုပရောဖက်ဖြစ်သည်။
၁၈၅၅ ခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်အခြေချနေထိုင်သူများရောက်ရှိခြင်းကိုတွန်းလှန်သောတိုက်လေယာဉ် Ndate Yalla Mboj
Lorsque les français arrivent au Sénégal en 1855 pour le coloniser, la première force de résistance qu'ils rencontrent est une femme. Son nom : Ndaté Yalla Mboj. Alors qu'en France...
အာဖရိကသည်အခြားသူများကို“ မြေသိမ်းယူခြင်း” ကိုကျွေးမွေးသည်။
၂၀ ရာစုအစတွင်၊ အာဖရိကတစ်ခုလုံး မှလွဲ၍ အီသီယိုးပီးယား မှလွဲ၍ Menelik II လက်အောက်တွင်အီတလီကျူးကျော်သူနှင့်လိုက်ဘေးရီးယားတို့ကအနိုင်ရခဲ့သည် ...
Leopold II ကို, tapper ကွန်ဂို
အမေရိကန်မဂ္ဂဇင်းအာဒံ Hochschild မှမေ့လျော့သောမီးလောင်တိုက်သွင်းခြင်းဖြင့်ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည်အလွန်တရာကြီးမားသည်။ ၁၈၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအကုန်ပိုင်းတွင်အမေရိကန်စူးစမ်းရှာဖွေသူဟင်နရီ၏အမြတ်ထုတ်မှုများ၏ပဲ့တင်သံ ...
၁၉၀၄ ခုနှစ်တွင်ဂျာမန်ကိုလိုနီအင်ပါယာမှ Hereros နှင့် Namas လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (နမီးဘီးယား)
၁၈၈၄ မှ ၁၉၁၅ အထိဂျာမနီသည်နမီးဘီးယားကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဂျာမန်ကုန်သည်တစ် ဦး သည်နိုင်ငံ၏အနောက်ဘက်၌စိန်တွင်းကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိပြီးနောက် ပဋိပက္ခများမကြာမီဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ...
အဆိုပါ Abbey အူမကြီး 1906-1916 ဆန့်ကျင်ပုန်ကန်
၄ င်းတို့ကိုအိုင်ဗရီကို့စ်၏စိတ်တွင်ပုန်ကန်သောလူမျိုးများအဖြစ်ခံယူသည်။ ကိုလိုနီခေတ်တွင်လူဖြူလူများ၏မြေများပေါ်တွင်ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခြင်းကိုလုံးဝငြင်းဆန်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
ကိုလိုနီစနစ်အပေါ်မိန့်ခွန်း - AiméCésaire
၎င်း၏လည်ပတ်မှုမှပေါ်ပေါက်လာသောပြtheနာများကိုမဖြေရှင်းနိုင်သောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုမှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာသည့်ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရှိဆုံးမှ၎င်း၏မျက်စိပိတ်ဖို့ရန်ရွေးချယ်သောယဉ်ကျေးမှုတစ်ခု ...
Samory Touréကို ၁၈၃၀ တွင်မျက်မှောက်ခေတ်ဂီနီ၌ရှိသော Miniambaladougou တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်သမုဒ္ဒရာကိုဖြတ်သန်းသောအပြန်အလှန်လဲလှယ်မှုများကိုအခွင့်ကောင်းယူကာကုန်သည်တစ် ဦး အဖြစ်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
1 ၏စာမျက်နှာ412...4အောက်ပါ
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Afrikhepri
သင် site ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကသင်၏သူငယ်ချင်းများ (သို့) မိသားစုနှင့်မျှဝေပါ။